Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh oo dhiirageliyey in laga fekero Soomaaliyada 2050-ka – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh oo dhiirageliyey in laga fekero Soomaaliyada 2050-ka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud, ayaa ku booriyey madaxda hadda talada haysa iney ka fekeraan sal u dhigidda Soomaaliyada uu dalkan u baahan yahay marka la gaaro 2050-ka. Waxa uu sheegay in, intey Soomaalidu isku timaado, arrinkaasna ay ka tashadaan, ay aad u sahlan tahay. “Haddii aan qorsheyno, oo aan dejino sodon sano kadib Soomaaliya nucee ahaan rabnaa, inta naga dambeysa wadadaas iney maraan wey ku qasbanaan doonaan, si Soomaaliyada fiican oon ku riyoon karno loo gaaro 2050-ka, intii nool” ayuu yiri Xildhibaan Xasan Sh. Maxamuud.
Waxa uu sheegay in arrinkaas la gaaro ay ku xiran tahay sida ay Soomaaliya uga go’an tahay dhisidda dowladnimada dalka. “Waan yeeli karnaa, waxaana u dhigi karnaa si inta dambeysee dhiman oo dhan aaney ka leexan karin” ayuu Xasan Sh. Maxamuud yiri markale. Isagoo xusaya waayaha dowladnimada Soomaaliya ayuu sheegay iney Soomaalida ugu filan tahay khibrad 30 sano (1960-1991) oo ay dowlad soo ahayd iyo 30 sano (1991-2019) oo ay ku jirta dagaal sokeeye iyo dib u hanashada dowladnimadeedii.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud waxaa, isaga oo ka hadlayey xalay Munaasabaddii Caleema-saarka Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa uu wax badan ku celceliyey in Soomaalida iyo hogaankeeda ay masuuliyad culus ka saaran tahay ka fekerka mustaqbal dalka. “Maanta, waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fekerno, oon caqilgeena isugu geyno, sodonka sano ee xigta, Soomaaliya nuucee ah ayaan ka talineynaa?” ayuu is weydiiyey Xasan Sh. Maxamuud.
Xasan, oo hadda ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, waxa uu sheegay in, inta ay Soomaaliya la’dahay dowladnimadeedii adkeed ay adkaan doonto in ay, haba-yaraatee, wax u saxmaan, sida uu hadalka u dhigay. “Aakhiradaada xitaa ma samaaneyso haddii aysan dowladnimadaadu sameyn” ayuu yiri Xildibaanku. Waxa uu sheegay iney muhiim tahay in sharciga qoran iyo dastuuska qabyada ah ay shacab iyo dowladba ku wada dhaqmaan, si aan leysugu xad-gudbin.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo xafiiskiisa u magacaabay Lataliye Sare
Sanatar Faroole oo ka digay iney Aqalka Sare iyo Xukuumaddu is-khilaafaan